वा ! भाले प्रथा « Janata Samachar
वा ! भाले प्रथा
‘पोथी बासे अनर्थ हुन्छ’ भनेर बास्न लागेको थाहा पाउनासाथ कुखुरीको टाउको काटेर घरको धुरी कटाउने प्रथा भएको हाम्रो समाजमा पोथी जाति बास्न हुँदैन, हाँस्न हुँदैन, बोल्न हुँदैन, केवल भालेको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाइयो । बास्ने काम त भालेको मात्र हो भन्ने पाठ रटाइयो । त्यहि संस्कार र परिवेशमा हुर्किएका हामीले कहिल्यै अलग तरिकाले सोचेनौं। जसले फरक ढंगले सोचे, फेरि कहिल्यै सोच्नै नसक्ने गरी उनीहरूको टाउको छिनालियो र धुरी कटाइयो।
समाजमा अझै पनि बास्ने भाले मात्र हो, पोथीले बास्नु हुँदैन भन्ने संकुचित मान्यता छ । ‘हामीले पनि आवाज निकालौं न, के हुँदोरहेछ’ भनेर अघि बढ्दा मान्छेका पोथीहरूको आवाज पनि बेलाबेला उसैगरी निमोठिने गरेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका वर्षा राउत, दिपाश्री निरौला र सरकारी बाइकमा सवार धादिङकी इञ्जिनियर थुप्रै घाँटी निमोठिने मध्येका केही उदाहरणहरू हुन्। सभ्य समाजमा अमर्यादित तवरले घाँटी निमोठिएको ज्वलन्त उदाहरण ।
केही महिनाअघि नायीका वर्षा राउत राष्ट्रियताको विषयमा निकै विवादमा आइन् । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाल र नेपालीले ‘हाम्रो हो’ भनिरहँदा भारत र भारतीयले पनि आफ्नै भएको दाबी गरे । अनि वलिउड नायिका मनिषा कोइरालाले नेपालको समर्थनमा बोल्दा भारतीय मिडियाले उनको खेदो नै गरे।
भारतमा नेपालीलाई र नेपालमा भारतीयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार नै नकारात्मक बन्दै गएको थियो । त्यसैबीचमा वर्षाको एउटा १५ सेकेन्डको भिडियो क्लिप भाइरल भयो । त्यहाँ उनले भनेकी थिइन्, ‘यो राष्ट्रियताको विषय हो, दुई देशको सरकार बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त हामी हामी बाझिरहेका छौँ, मिडिया-मिडिया जुधिरहेका छन् । यसरी त दुई देशको सम्बन्ध मात्र बिग्रिन्छ । भोलि भारत जाँदा मेरा भारतीय साथीहरुसँग यस विषयमा मैले कसरी सामना गर्ने ? उनको पुरै भिडियो हेर्ने हो भने उनी विवादमा आउनु पर्ने कुनै गम्भीर कारण भेटिँदैन ।
कहिँकतै उनको भनाइ ‘अराष्ट्रिय’ देखिँदैन । उनको तर्क सहि थियो । हामीहामी झगडा गरेर, मिडिया-मिडिया जुधेर केवल दुई देशको सम्बन्ध बिग्रन्थ्यो । समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहलको आवश्यकता थियो । तर उनको नियत गलत थिएन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि वर्षामाथि सामाजिक संजालमा अपाच्य र सुन्नै नसकिने शब्दका गालीको वर्षा भयो । उनीमाथि खनिने ९९ प्रतिशतले सायद पुरै भिडियो हेर्ने र वास्तविकता बुझ्ने कोशिसै गरेनन् । वर्षालाई अराष्ट्रिय भनेर अपमान गर्नेहरु आफैँ कत्तिको राष्ट्रवादी होलान् ? एउटी नारीमाथि गाली गरेर हाम्रो राष्ट्रियता कसरी मजबुत हुन्छ कुन्नि ?
उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘पुराणपात्र राम’ नेपालमा जन्मेका हुन्, अयोध्या नेपालमा पर्छु भन्दा अब भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिने भयो भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि नै धावा बोल्नेहरुको कमी छैन। विषय फरक होला तर कुरा एउटै हो ‘छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन्’ । एउटै कुरा गर्दा वर्षामाथि भद्दा गालिको वर्षा गरियो तर पुरुषका हकमा त्यस्तो हुन्न, किन ? किन कि भाले स्वघोषित शासक हुन्। उनीहरूले बासेको सुहाउँछ। युगौंदेखि प्रायस् भाले नै बासेका छन्। अनि यत्रा भालेका बीचमा पोथीले आवाज निकाल्न मिल्छ? पोथी वर्षाले बास्न मिल्छ ? एक महिना अघिदेखि चलचित्र निर्देशक तथा फिल्म कलाकार दीपाश्री निरौलाको ‘महानायक काण्ड’ अझै साम्य भएको छैन । उनको एउटा अन्तर्वार्ता भिडियो क्लिप सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । त्यहाँ उनले भनेकी छन् ‘राजेश हमाल महानायक हो र ? महानायक भए उहाँ किन हाल यस क्षेत्रमा हुनुहुन्न त ? भारतीय महानायक अमिताभ बच्चन त अझै यसै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ?’
दिपाको भनाइबाट स्पष्ट बुझिन्छ-महानायक भएपछि हमालले फिल्मी क्षेत्रको अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने हो तर उहाँ फिल्म क्षेत्रबाटै अहिले टाढा हुनुहुन्छ । हमालले चलचित्र क्षेत्रप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएन । तर महानायकका फ्यान हुँ भन्नेहरु कुराको चुरो बुझ्नतिर लागेनन्। आइमाइ भएर ठूला कुरा गरेकोमा तिनको भाले अहंकार बास्न थाल्यो। ती मिलेसम्मका संजाल प्लेटफर्महरूमा दीपालाई ठुंग्न थाले। कहाँ निहुँ पाउँ र नङ्ग्याउँ भनेर दाउ हेरे झैँ गरी दिपाको खेदो गर्न थाले। सफेद निन्दा र गालीबेज्जेती तिर लागे । गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्दासम्म पनि दिपाले सुख पाइनन् ।
तर दीपामाथि त्यति निर्मम प्रहार गर्नुपर्ने भन्ने कुनै जायज कारण देखिँदैन । धेरै फ्यान छन्, धेरै फिल्म खेलेका छन् भनेर सबैले राजेशलाई नै महानायक स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि त छैन । फेरि महानायकको उपाधि भिरेर मात्र पनि हुँदैन् । उपाधीको जिम्मेवारी पनि त पूरा गर्नुपर्ने होइन् र ? बच्चा जन्माएर मात्रा आमाबाबु भइँदैन । बच्चा जन्माएपछि आमाबाबुको जिम्मेवारी पनि त पूरा गर्नुपर्छ नि । जिम्मेवारीबाट पन्छिने आमाबाबुलाई सन्तानले कहिलेसम्म आमाबाबु भन्छन् ?
हमाल महानायक हैन भनेर अन्य केही नायक, खलनायकले दिएका अन्तर्वार्ता पनि यसअघि पटक-पटक सुनिएका थिए । तर उनीहरु कहिल्यै विवादमा आएनन्। उनीहरुले गाली खाएनन् । उनीहरुको चरित्र हत्या भएन्। किनकि उनीहरु भाले हुन् । र, यहाँ युगौंदेखि भाले बासिरहेको छ। तर पोथी दिपाहरूलाई त्यो छुट छैन। खासमा दिपाहरुले फिल्म निर्देशन नै गर्न हुँदैन थियो । दिपाहरुले नेपाली फिल्मि दुनियाँमा नयाँ इतिहास बनाउनै मिल्दैन थियो। भालेदृष्टिमा दिपाहरू आफैंमा स्वतन्त्र अस्तित्व नै होइनन्। दिपाहरूले खासमा आफूखुसी बोल्नै मिल्दैन। त्यसो गरे त्यो दिपाको घमण्ड हो । दिपा र वर्षाहरूले चर्को बोले। त्यो नमिठो र कर्कस आवाज हो, अराष्ट्रिय धुन हो।
केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल भयो । तस्बिर यसकारण भाइरल भयो कि सरकारी नम्बर प्लेट भएको मोटरसाइकलमा सवार महिलाले लगाएको कपडा पछाडीपट्टि जालिदार थियो। पछाडीबाट हेर्दा महिलाको ढाड अलिअलि देखिन्थ्यो टिप्पणी गर्ने धेरैले भने ‘सरकारी गाडिको दुरुपयोग भयो, सरकारी बाइकमा केटी घुमाउन लगियो ।’ तर बाइकको पछाडि बसेकी उनी आफैं सरकारी जागिरे थिइन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको सब इन्जिनियर । तर कसैले कल्पन्नासम्म पनि गरेन कि उनी सरकारी जागिरे पनि हुन सक्लिन् भनेर ।
यहाँ ‘केटी घुमाउने’ दृष्टिबाट मात्र तस्वीरलाई हेरियो। समाजलाई त्यस्तै लाग्छ-केटी घुमाइने चीज हो । केटी आँफैमा जागिरे होलिन् भनेर पूर्व सचिव भीम उपाध्यायजस्ता पुरुषहरूले कसरी सोच्न सकुन्रु केटी मान्छे जागिरे हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै हामीमा बनिसकेको छैन सायद । जब उनी सब इन्जिनियर भएको जानकारी आयो अनि फेरि मर्यादाका कुरा गर्न थालिए। फोटो भाइरल गराएर, उनीमाथि अनेकन अड्कल काटिएर, उनीमाथि गालिको वर्षा गरेर पुगेन हामीलाई। अनि फेरि सरकारी गाडीमा हिँड्दा मर्यादित कपडा भएन भन्ने अर्को व्याख्या थपियो । उनले काम गर्ने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतले स्पष्टिकरण माग्ने र कारबाही गर्ने सम्मका कुरा गरेछन्।
उदेकलाग्दो छ मेरो समाज। अरे वा मेरो समाज १ युगौंदेखि लङ्गौटीले गुप्ताङ्ग छोपेछोपेजस्तो गरेर हिँड्न पुरुषलाई छुट छ। तिनको पर्याप्त सम्मान पनि छ। तर महिलाका भित्री र बाहिरी सबै लुगाको नापजाँच र परीक्षणका लागि भाले समाज सदा परीक्षक-मुडमा तयार छ। महिलाले केही लगाइहाल्लान् अथवा केही बोलिहाल्लान् र त्यही मौकामा तिनलाई मुखमा आउनेजति सबै गालि-निन्दा गरौंला भनेर भाले समाज सामाजिक संजालको कमेन्ट सेक्सनमा टुक्रुक्क उभिएको छ। छि !